Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Abu-Muhammad al-Shimali
Hoggaanka Sare ee Kooxda Ururka Islaamka ee Daacishta Ciraaq iyo Suuriya (ISIL) Hoggaamiyaha Xuduuda Tirad al-Jarba, oo loo yaqaano magaca Abu-Muhammad al-Shimali, waxaa lala xiriirinnayaa kooxda ISIL, kooxdaasoo horey loogu yeeri jiray oo magacoodu ahaa al-Qaida da Ciraaq, tan iyo ilaa sannadkii 2005. Hadda wuxuu hayaa jagada ugu sareyso ee ugu muhiimsan ee Guddiga Isku-duwida iyo Socdaalka ee ISIL, oo wuxuu mas’uul ka yahay fududeynta ah inuu sahliyo safarka ama socdaalka argaggixisada shisheyaha ah isagoo u sahliya inay soo dhexmaraan Gaziantep, Turkey, oo ay uga soo gudbaan dhulka uu ururka ISIL uu haysto ee magaaladda xudduuda ah ee Jarabulus, Suuriya. Al-Shimali iyo Guddiga Isku-duwida iyo Socdaalka ee ISIL waxay isku-dubarridaan dhuumaalaysiga, lacag dirrida, iyo isku duwida socdaalka ee Suuriya iyo Ciraaq ee laga soo galaya qaaraddaha Yurub, Waqooyiga Afrika, iyo Jasiiradda Carabta. Sannadkii 2014, al-Shimali wuxuu fududeeyay safarrada Turkey loogu yimaada oo Suuriya ay ku soo galaan dagaalyannada ISIL oo ka kala yimid Aasuraaliya, Yurub, iyo Barriga Dhexe, oo wuxuu maarayn jiray xarrunta geedi-socodka ISIL ee dagaalyahannada hadda la qoray looga diiwaangeliyo Azaz, Suuriya.
Dowladda Maraykanka iyo Isbaheysida Caalamka oo ka kooban in ka badan 60 guddiyo caalami ah oo isku kaashaday kaasoo ka go’an in hoos ay udhigaan, oo ugu dambeyntiina ay ka guulaystaan, ururka ISIL. Si hadafkan loo gaaro waxaa loo baahan yahay dadaal dhowr ah, oo loo dhan yahay. Mid ka mid ah dadaaladda ugu muhiimsan ee ugu weyn ee Isbaheysiga ayaa ah in la joojiyo qul-qulka dagaalyahannada argaggixisada shisheeyaha. Xeelladdan waxay ay si wadajir ah ay isugu keenaysaa dadaallada waaxda ammaanka wadanka, sharci fulinta, qaybta caddaaladda, sirdoonka, diblomaasiga, ciidanka, awood dhisidda, iyo xog qaybsiga.
In ka badan 25,000 oo ah dagaalyanno argaggixiso shisheeye ah oo ka kala yimid in ka badan 100 wadan ayaa usoo safray wadamada Ciraaq iyo Suuriya. Baraha lagu dagaallamo ee ku dhexyaalo wadanka Ciraaq iyo Suuriya ayaa dagaalyanno argaggixiso shisheeye siisay goob ay ku korrasadaan qibrad, hub iyo tababar dhanka qarxiska, oo waxay heleen shabad u fududysa qorshaynta weerrada lagu bartilmaameedsdo reer Galbeedka. Cabsiga la wadaago ee dagaalyanno argaggixiso shisheeye ay ku hayaan ayaa ah tan horseeday in iskaashi hoosaad ah uu dhexmaro hay’addaha dowladda federaalka ee Maraykanka iyo iskaashiga caalamiga, kaasoo iska kaashanaya dhammaan xeelladdaha lagu carqaladeeyo qulqulka dagaalyanada oo kama damayskiina loogu guulaysto ururka ISIL.
Tariikhda Dhalashada: 20ka, Nofembar, 1979
Halka uu ku Dhalashay: Ciraaq
Jinsiyad: Sacuud Carabiya
Baasaboor: E704088 (Sacuud Carabiya)
Taariikhda Baasaboorka la soo Saaray waa: 26ka Agoosto, 2003
Taariikhda Baasaboorku uu Dhacayo: 2dii Luulyo, 2008
Naanays: Tarad Aljarba